Maalintii jacaylku luntay: cutubkii ugu dambeeyay ee bilogy Javier Castillo | Suugaanta hadda jirta
Maalintii jacaylku lumay
Xigasho Maalintii Jacaylku Khasaaray: Apple
Haddii maalmo ka hor aan kuu sheegnay buug Maalintii miyirkiisu ka lumay, munaasabaddan iyo in la dhammaystiro bayoolajiga aad ka heshay buugaagtan, waxaan dooneynaa inaan kula faalloono Maalintii jacaylku lumay, qaybtii labaad ee dhammaata, inkasta oo ay jiraan waxyaabo aan la aqoon, taariikhda jilayaashaas.
Haddii aad aqrisay Maalinta aad lumisay Nadaafadda oo aad haddaba ka fekereyso inaad bilowdo tan labaad, waad awoodaa. Laakiin haddii aysan dareenkaaga soo jiidan oo aadan weli siinin fursadda, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad fiirin lahayd waxaan diyaarinay si aad u ogaato waxaad heli doontid.
1 Waa kuma qoraaga maalinta jacaylka luntay
2 Maxaad u baahantahay inaad ogaato kahor aqrinta Maalintii jaceylka luntay
3 Maxaa ku saabsan
4 Jilaayaal Maalintii Jacaylku Khasaaray
Waa kuma qoraaga maalinta jacaylka luntay
Sida buugga ka hor, Maalintii jacayl lumay waxaa qoray Javier Castillo. Iyo, markii uu daabacay sheekada koowaad, wuxuu ka tagay suurta galnimada qayb labaad haddii uu arko inay guuleysatay. Sidaa awgeed, markii xuquuqdii laga iibsaday oo buuggii ugu horreeyay dib loo daabacay, muddo yar gudahood ayaa waxaa soo muuqday qaybtii labaad ee uu hindisay.
Xaqiiqdii, waa inaad ogaataa in Javier Castillo uu ahaa lataliye maaliyadeed, ka dib guushii uu ka gaadhay buugaagtiisii, wuu iska dhaafay oo wuxuu si buuxda diiradda u saaray mihnadda suugaaneed ee isaga siisay guusha intaa leeg.
Buugaggii ugu dambeeyay ee lasii daayay waa laga bilaabo sannadkan, Nolosha Ciyaarta, oo ay ku socoto qaabkeeda sheeko, mid fudud oo madadaalo leh (marka aad fahanto "ciyaarta" ee uu qoraagu u keenayo inta udhaxeysa iyo tan maanta).
Maxaad u baahantahay inaad ogaato kahor aqrinta Maalintii jaceylka luntay
In kasta oo Maalintii jacaylku lumay la akhrin karo iyada oo aan la akhrin tan hore, haddana waxa jira nuyuusyo gaar ah oo lumaya haddii aad sidan u samayso. Jilayaashu waxay ku kobcayaan buugga koowaad, markaa markaad akhrido, waa nooc aan dhammaystirnayn. Hadda, sidoo kale waa run in waxa qoraagu ku sameeyay buuggan ay u dhowdahay "nuqul" (oo aan ka wada hadli doono marka xigta)
Aragtidayada, Si aad u fahamto 100% buugga Maalintii Jacaylku Khasaaray, waa inaad taariikh ka soo horreysaa yeelataa, ogow waxa dhacay iyo sababta buuggu sidaas ugu bilaabmay (oo dareenkaagana kuma qabanayo). Intaa waxaa dheer, inaad horeyba aqoon ugu laheyd jilayaasha, waxay kuu ogolaaneysaa inaad diirada saarto kuwa cusub. Waxaad horeyba u ogtahay sida kuwa kale yihiin, sidaa darteed waxbadan oo aad ka ogaato dabeecad gaar ah waxay noqoneysaa yoolkaaga.
Hada, kawaran hadaadan akhrin tan hore? Hagaag, si uun, waxna ma dhici doonaan; taasi waa in la yiraahdo, waxaa jira waxyaabo aadan fahmin laakiin ay aad ugu yar yihiin, maxaa yeelay labada buugaagba aad ayey iskaga mid yihiin oo, inta ugu xeel dheer, waxay ku dhammaan kartaa in la saadaaliyo.
Wixii ku saabsan inaad ogaato, waxa ugu muhiimsani waa waxa jilayaasha ugu muhiimsan 'ka soo bandhigaan' qorshaha buugga koowaad (iyo inaanan rabin inaan kuu sheegno) maadaama ay tahay mashiinka xididka qaybtaas labaad. Sidoo kale jilayaasha, gaar ahaan Jacob iyo khabiirka FBI, laba ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Sida "ninka xun" sheekada, inkasta oo aynaan fiicnayn in aanaan wax ka sheegin buugga koowaad.
Maxaa ku saabsan
Maalintii jacaylku lumay waxay u bilaabmaysaa sidii tii ka horreysay oo kale, iyadoo qof qaawan gacantiisa ku sito wax cabsi leh. Markuu joojiyo, waxay umuuqataa inay waxbadan ka taqaan booliska, waana halka ay ciyaarta ka bilaabmayso, ee udhaxeysa waagii hore iyo hada, iyadoo la raacayo isla safka, helitaanka Amanda, Steven gabadhiisa iyo gabadha Yacquub aad ayey u jeclaadeen. Laakiin taasi waagii hore, maxaa yeelay xilligan xaadirka ah waxaan lahaan doonnaa jilayaashaas oo ay weheliyaan kuwa kale oo la falgalaya oo muujinaya faahfaahin cusub.
Waxaa laga yaabaa in waxa aqristaha ugu badan ee uu doonayo inuu ogaado uu yahay waxa ku dhaca qof kale, waana taas sababta qofkii akhriya qaybta hore uu ugu kaco tamashle soo noqnoqda tan labaad.
Riwaayad cusub oo aad heli doontid ayaa ah, buuggan labaad, cutub kasta waxaa madax u ah magaca mid ka mid ah jilayaasha waaweyn (akhristayaal badan ayaa ka cawday maxaa yeelay midkii ugu horreeyay ayaa qasan oo qoraagu dhibaatada ayuu sidan uga hadlay).
Jilaayaal Maalintii Jacaylku Khasaaray
Astaamaha Maalintii jacaylku lumay Waxay la mid yihiin maalintii uu lumiyay miyir-qabka. Laakiin waxaan sidoo kale ka hadleynaa wajiyadeena oo xiriir dhow la yeelan doona shirqoolka. Kuwani waa:
Sujuudda Sujuudda: Waa kormeeraha FBI-da, wuxuu ku daalay nolol maalmeedkiisa wuxuuna ku jahwareersan yahay inuusan gaarin riyadiisii ​​ahayd inuu noqdo dambiile.
Leonard: waa kaaliyaha Bowring Bowring.
Katelyn dahablaha: Waxay ku saabsan tahay gabar sanado ka hor la waayey, mid ka mid ah kiisaskii ugu horreeyay ee kormeeraha ee aysan waligood helin. Wuxuu u arkaa inay tahay guuldaro.
Jack: waa aabaha adeerkiis Katelyn.
Bandhige: waa qofka sheekada bilaabaya, naag qaawan oo dhahda waan ogahay waxa dhici doona. Marka waxay ku waalaysaa kormeeraha waalli.
Dhamaan astaamahan waxay sidoo kale la falgalayaan kuwa aan naqaano, marka waxaa jira jilaayaal badan, kuwa waaweyn iyo kuwa sare, oo aad u baahan tahay inaad la socoto.
Fikradaha qaybtan labaad waxaa leh dhammaan dhadhanka. Waxaa jira kuwa jeclaa, gaar ahaan maxaa yeelay waxay si qoto dheer u sii faafaahinaysaa faahfaahinta ka furfurnayd buugga koowaad; iyo cidda aan jeclayn maxaa yeelay waxay raacdaa qaab la mid ah kii ugu horreeyay, sidaas darteedna, 'nimcadiisii ​​way lumisaa'.
Xaaladayada, waxaan kuu sheegi karnaa:
Haddii dhammaadka Maalinta uu Maskaxda ka lumay kuuma keenin inaad ogaato waxa ku dhacay dabeecad gaar ah, ama haddii aadan u malayn inaad u baahan tahay baahidaas, waxaa habboon inaad akhrido oo aad waxoogaa sugto inaad akhriska ku qaadato raaxo badan. Haddii kale waad niyad jabi kartaa.
Haddii aad runtii rabto inaad wax akhrido, markaa samee, gaar ahaan maxaa yeelay waxaad dooneysaa inaad ogaato waxa ku dhacay qoyska oo dhan, iyo waxa dhici doona waqtigaaga. In kasta oo ay la mid tahay tii hore, haddana waxaa jira faahfaahin kaa sii haynaysa bogagga illaa dhammaadka (taas oo, sida dhammaan qoraagan oo dhan, aan la saadaalin karin, ugu yaraan illaa intaad horeba u tahay dhammaadka).
Hore ma u aqrisay? Maxaad ka fikirtay Maalintii jacaylku luntay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Maalintii jacaylku lumay
Qoob ka ciyaarka tulips
Sara Gutierrez. Wareysi lala yeeshay qoraaga Xagaagii ugu dambeeyay ee USSR